Izinqolobane ZaseBill & Melinda Gates Foundation - Ilungelo Lokwazi lase-US
Isisekelo seBill & Melinda Gates
Izimali Zenethiwekhi Yezenhlalo Yesimo Sezulu Esenqabela Inkohliso Yamakhemikhali Anobuthi
Posted on Mashi 2, 2017 by UStacy Malkan
Zikhuthaza ama-GMO nemithi yokubulala izinambuzane, zivikela amakhemikhali anobuthi nokudla okungenamsoco, futhi zihlasela abantu abaphakamisa ukukhathazeka ngaleyo mikhiqizo ngokuthi “balwa nesayensi.” Kodwa-ke uJon Entine, uTrevor Butterworth noHenry Miller baxhaswa ngamaqembu afanayo axhasa ukwenqatshwa kwesayensi yezulu.
Umbhali waseBrithani uGeorge Monbiot unesixwayiso kulabo bethu abazama ukuqonda amaqiniso amasha ezepolitiki e-US nase-UK: "Asinalo ithemba lokuqonda ukuthi yini ezayo kuze kube yilapho siqonda ukuthi inethiwekhi yemali emnyama isebenza kanjani," wabhala ku i-Guardian.
Kungenzeka ukuthi iCorporate America yehlisa ukwenanela uDonald Trump, kepha kwathi lapho uTrump esekutholile ukuqokwa, "imali enkulu yaqala ukuthola ithuba elingakaze libonwe," kubhala uMonbiot. “Ukungahambisani kwakhe kwakungeyona inkinga, kepha kwakuvula: i-ajenda yakhe yayingakhiwa. Futhi uhlelo olumnyama lwemali olwalusungulwe ezinye izinkampani zaseMelika lwalulungele ngokuphelele ukulwakha. ”
Le nethiwekhi, noma imali emnyama i-ATM njengoba uMama Jones ekuchazile, kubhekiswa enanini elinzima lokulandela umkhondo eligeleza lisuka kozigidigidi abangamasiko amakhulu, abanjengoCharles noDavid Koch nababambisene nabo, nezinkampani eziba ngamaqembu angaphambili akhuthaza imibono yezimakethe ezikhululekile ngokweqile - ngokwesibonelo, izimpi ezilwa nezikole zomphakathi, izinyunyana, ukuvikelwa kwemvelo, izinqubomgomo zokuguquguquka kwesimo sezulu kanye nesayensi esongela inzuzo yebhizinisi.
"Asinathemba lokuthi sizokuqonda okuzayo size siqonde ukuthi isebenza kanjani imali emnyama."
Ababhali abaphenyayo UJane Mayer, UNaomi Oreskes, u-Erik Conway kanti abanye badalule ukuthi “indaba yemali emnyama nendaba yokwenqatshwa kwesimo sezulu iyindaba efanayo: izinhlangothi ezimbili zemali eyodwa,” njengoba uSenator wase-United States uSheldon Whitehouse ayichaza ngonyaka odlule inkulumo.
Amasu "okuholwa nguKoch, umsebenzi wokuthenga umthelela" - kufaka phakathi imisebenzi yenkulumo-ze ejikeleza isayensi ngaphandle kokubheka iqiniso - "mhlawumbe yisona sizathu esikhulu esingenayo umthetho-mali ophelele wesimo sezulu eCongress," kusho uWhitehouse.
Ngenkathi la maqhinga elandelelwe kahle emkhakheni wesimo sezulu, okungaxhunywanga kangako iqiniso lokuthi abaxhasi abalandela ukuphika kwesayensi yesimo sezulu baphinde babhalise inethiwekhi yabasebenzi be-PR abakhe imisebenzi yokuphotha isayensi ukuphika ubungozi bezempilo bamakhemikhali anobuthi ekudleni esikudingayo sidle nemikhiqizo esiyisebenzisa nsuku zonke.
Izigxobo ziphakeme empilweni yesizwe sethu. Amanani we- umdlavuza wezingane manje seziphezulu ngama-50% kunangesikhathi lapho “impi yomdlavuza” yaqala emashumini eminyaka adlule, futhi isikhali esihle kunazo zonke asisisebenzisi neze: izinqubomgomo zokunciphisa ukutholakala kwamakhemikhali abangela umdlavuza.
"Uma sifuna ukunqoba impi yomdlavuza, sidinga ukuqala ngamanxusa ayizinkulungwane omzimba namakhemikhali ahlolwe ngangokunokwenzeka, okungenzeka noma aziwa ngama-carcinogens ngabantu yi-International Agency for Research on Cancer of the World Health Organisation" kubhala usosayensi nomlobi uDevra U-Lee Davis, PhD, MPH, ku The Hill.
Ukunciphisa amanxusa aziwayo "akuhlangene neze nesayensi, futhi kuningi okuphathelene namandla ezimboni ezinenzuzo enkulu ethembele ebudlelwaneni bomphakathi ukuphikisana nemibiko yesayensi ngobungozi," kusho uDavis.
Ukuvikela amakhemikhali anobuthi nokudla okungenamsoco
Lapho imikhiqizo ebalulekile embonini yokudla kwamakhemikhali nokudla okungenamsoco ingena enkingeni ngesayensi, kuvela abalingiswa namaqembu abikezelwayo endaweni yesehlakalo, besebenzisa amasu abezindaba agugile ukukhipha izinkampani ezidinga ukukhuthazwa yi-PR.
Amagama abo namasu abawasebenzisayo - izindatshana ezinde eziphikisayo, ezivame ukwenziwa ukuhlaselwa ngabantu - zizokwaziwa ososayensi abaningi, izintatheli kanye nabameli babathengi abaphakamise ukukhathazeka ngemikhiqizo enobuthi kule minyaka eyi-15 edlule.
Izicelo zamarekhodi womphakathi ngu I-US Ilungelo Lokwazi ezivundulule izinkulungwane zemibhalo, kanye nemibiko yakamuva eyenziwe ngu Greenpeace, The Ngenisa nabanye, bakhanyisa ukukhanya okusha kule nethiwekhi yenkulumo-ze.
Abadlali ababalulekile kubalwa uJon Entine, uTrevor Butterworth, uHenry I. Miller namaqembu axhumene nabo: STATS, Centre for Media and Public Affairs, Genetic Literacy Project, Sense About Science neHoover Institute.
Yize kunemilando ebhalwe kahle njenge-PR operatives, i-Entine, iButterworth neMiller yethulwa njengemithombo yesayensi ebucayi ezinkundleni zokuxhumana eziningi, ezivela Wall Street Journal, New York Times, Los Angeles Times, Newsweek, I-Philadelphia Enquirer, I-Harvard Business Review futhi, bridge ngokuvamile, Forbes - ngaphandle kokudalulwa kwemithombo yabo yezimali noma i-ajenda yokususa umthetho ezimbonini ezingcolisayo ezizikhuthazayo.
Izindatshana zabo zibeka phezulu ekusesheni kweGoogle izinto eziningi eziseqhulwini embonini yamakhemikhali nokudla okungenamsoco - okucindezela ukulandisa kokuthi ama-GMO, izibulala-zinambuzane, amakhemikhali epulasitiki, abashukela esikhundleni sikashukela baphephile, futhi noma ngubani osho okwahlukile ukuthi “uphikisana nesayensi.”
Kwezinye izimo, bathola ithonya njengoba behambisana nezikhungo zokusungula ezifana neBill & Melinda Gates Foundation, iCornell University kanye neYunivesithi yaseCalifornia, eDavis.
Kodwa-ke imithombo yabo yezimali ibuyela emuva emibonweni efanayo "yemakethe yamahhala" evela emafutheni kawoyela, ezemithi namakhemikhali axhasa ukwenqaba kwesayensi yezulu - ISearle Freedom Trust, Izisekelo zeScaife, IJohn Templeton Foundation nabanye bahlonzwa njengabaxhasi abakhulu nabangaguquguquki bamaqembu aphika isayensi yezulu, ngokusho kuka Ucwaningo lwe-2013 nguDrexel University isazi sezenhlalo uRobert Brulle, PhD.
Labo abafuna ukuqonda imigomo yenqubomgomo yenethiwekhi yemali emnyama yokuqaqa ukuvikelwa kwezempilo kohlelo lwethu lokudla benza kahle ukubheka lokhu abasakaza inkulumo-ze banamuhla nemiyalezo yabo.
UJon Entine - Iphrojekthi ye-Genetic Literacy / STATS
UJon Entine, owayekade eyintatheli, uzibonakalisa njengegunya lokulawula isayensi. Noma kunjalo ubufakazi obanele busikisela ungumsebenzi wobudlelwano bomphakathi obunesikhathi eside enobudlelwano obujulile nezinkampani zamakhemikhali ezihlushwa imibuzo ngezingcuphe zezempilo.
Eminyakeni edlule, u-Entine unakho ehlaselwa Lokhu ososayensi, oprofesa, abaxhasi, abameli futhi izintatheli ngubani ophakamise ukukhathazeka mayelana ukukhwabanisa, amandla enuzi, izibulala-zinambuzane futhi Amakhemikhali esetshenzisiwe amabhodlela ezingane futhi amathoyizi ezingane. Indaba kaMama Jones ka-2012 kaTom Philpott ichaza u-Entine njengo “Umxolisi webhizinisi lezolimo, ”Futhi uGreenpeace uchaza umlando wakhe ku Iwebhusayithi yokubuka iPolluter.
U-Entine manje ungumqondisi we Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, iqembu eligqugquzela ukudla okwenziwe ngezakhi zofuzo kanye nemithi yokubulala izinambuzane. Isiza sithi asithathi hlangothi, kepha “sakhiwe ngokusobala ukukhuthaza isikhundla semboni futhi asizami ukubheka ukungathathi hlangothi ezindabeni,” kusho uMichael Hansen, PhD, usosayensi omkhulu we-Consumers Union.
"Umyalezo uthi ukwenziwa kwezakhi zofuzo muhle futhi noma ngubani okugxekayo uyimbono esabekayo, kepha lokho akusho ukuthi impikiswano yesayensi ikuphi ngempela."
Faka izimangalo, isibonelo, ukuthi "ukuvumelana kwesayensi mayelana nokuphepha kwe-GMO kunamandla ukwedlula ukufudumala kwembulunga yonke" - isimangalo esiphikiswa yi-World Health Organisation, esithi akunakwenzeka ukwenza izitatimende ezijwayelekile ngokuphepha kwe-GMO, nangamakhulu ososayensi abathi kukhona akukho ukuvumelana kwesayensi kwezokuphepha kwe-GMO.
Iphrojekthi ye-Genetic Literacy Project nayo ayizange iveze obala mayelana nokuxhumana kwayo neMonsanto. Njengesibonelo esisodwa, isayithi lishicilele amaphepha amaningi ezifundo ze-pro-GMO ama-imeyili adalula kamuva ukuthi ayenjalo abelwe osolwazi yisiphathimandla seMonsanto esihlinzeke ngezindawo zokukhulumela amaphepha futhi sathembisa ukuthi bampompe baphume yonke indawo i-Internet.
Esinye isibonelo: Abalingani be-Genetic Literacy Project babambisana ne-Academics Review ku- Iphrojekthi Ye-Biotechnology Literacy, izingqungquthela ezisekela izimboni eziqeqesha ososayensi nezintatheli ngokuthi "zingayifaka kanjani kangcono impikiswano ye-GMO nomphakathi ongabazayo."
"Ukhiye kuzogcina iMonsanto ingemuva ukuze ingalimazi ukwethembeka kolwazi."
Ukubuyekezwa kwezifundo, okushicilele i- umbiko ngo-2014 behlasela imboni ephilayo, baziveza njengeqembu elizimele, kodwa ama-imeyili embuliwe yasungulwa ngosizo lwesikhulu esiphezulu seMonsanto esathembisa ukuthola imali "kuyilapho iMonsanto igcina ngemuva ukuze ingalimazi ukwethembeka kolwazi." Ama-imeyili futhi wabonisa owayengumsunguli we-Academics Review uBruce Chassy wayekade ethola Izimali ezingadalulwanga ezivela eMonsanto nge-University of Illinois Foundation.
Ngakho-ke ngubani oxhasa iPhrojekthi ye-Genetic Literacy and Entine?
Ngokusho kwabo iwebhusayithi, inqwaba yemali ivela ezisekelweni ezimbili - iSearle neTempleton - ekhonjwe ku- Ucwaningo lwe-Drexel njengabaxhasi abaphambili bokuphika isayensi yezulu Lesi siza siphinde sibhale uxhaso lweWinkler Family Foundation futhi "sidlule sisekela i-University of California-Davis Biotech Literacy Bootcamp" esivela kwi-Academics Review Charitable Association.
Imithombo yezimali yangaphambilini ibuye ifake abasekeli bokuphika isayensi yezulu kanye nokudluliswa kwemali okungadalulwanga.
IGenetic Literacy Project ne-Entine phambilini bezisebenza ngaphansi kwesambulela seStatistical Assessment Services (STATS), iqembu eliseGeorge Mason University, lapho u-Entine ayengumuntu khona eCentre for Health and Risk Communication kusuka ngo-2011-2014.
I-STATS ixhaswe kakhulu yi-Scaife Foundation neSearle Freedom Trust phakathi kuka-2005 no-2014, ngokusho kophenyo lweGreenpeace Uxhaso lwe-STATS.
UKimberly Dennis, umongameli kanye ne-CEO yeSearle Freedom Trust, futhi ungusihlalo webhodi leDonors Trust, elidume kabi Isikhwama semali esimnyama esixhunywe nguKoch abanikeli babo abangalandelelwa. Ngaphansi kobuholi bukaDennis, iSearle neDonors Trust yathumela imali engama- $ 290,000 ku-STATS ngo-2010, kubika iGreenpeace.
In 2012 futhi 2013, I-STATS ithole izimali ezibolekwe ngenhlangano engudadewabo, iCentre for Media and Public Affairs, okuyi wathola Iminikelo ngaleyo minyaka evela eGeorge Mason University Foundation, okuyi ayivezi imithombo yezimali.
U-Entine uke wazama ukuziqhelelanisa kwesinye isikhathi ne-GLP okuvela kula maqembu; kodwa, amarekhodi entela i-Entine ikhokhelwe u- $ 173,100 yiCentre for Media and Public Affairs ngonyaka ophela ngoJuni 30, 2015.
Nge-2014, ama-imeyili ayabonisa, U-Entine wayezama ukuthola ikhaya elisha le-Genetic Literacy Project, futhi wayefuna ukusungula “ubudlelwano obusemthethweni” ne-University of California, Davis, World Food Centre. Ube ngumuntu oMdala eSikoleni se-Institute for Food and Agricultural Literacy futhi manje ukhomba njengomuntu owayekade esebenza naye. I-GLP manje isingaphansi kwesambulela seqembu elibizwa ngeSayensi Literacy Project.
U-Entine uthe ngeke aphendule imibuzo ngale ndaba.
UTrevor Butterworth - Umuzwa NgeSayensi USA / STATS
UTrevor Butterworth ubethembekile imboni isithunywa iminyaka eminingi, ukuvikela ukuphepha kwemikhiqizo ehlukahlukene eyingozi ebalulekile ezimbonini zamakhemikhali nezokudla okungenamsoco, njenge phthalates, BPA, i-vinyl plastic, isiraphu yengqolowa, ama-sodas anoshukela futhi ubumnandi bokufakelwa. Ungumnikeli wangaphambili ku Newsweek futhi ubhale ukubuyekezwa kwezincwadi ze- Wall Street Journal.
Kusukela ngo-2003 kuya ku-2014, iButterworth ibingumhleli kwa-STATS, ixhaswe kakhulu yi-Scaife Foundation neSearle Freedom Trust. Ngo-2014, waba ngumqondisi wokusungula we Inzwa Mayelana neSayensi USA bese ngigoqa ama-STATS kulelo qembu.
Ukudalulwa kwakamuva kukaLiza Gross ku I-Intercept ichaze iSense About Science, umqondisi wayo uTracey Brown, uButterworth, i-STATS kanye nabasunguli balawo maqembu “njengabaqokiwe abazimele besayensi yomsindo” “abalinganisa izikali embonini.”
I-Sense About Science "izama ukusiza umphakathi onolwazi olungelona iqiniso ukuthi ihlunge izimangalo ezethusayo ngempilo nemvelo" kepha "inomlando ophazamisayo wokuqhakambisa ochwepheshe okuvele ukuthi banezibopho nezimboni ezilawulwayo," kubhala uGross.
"Uma izintatheli zibuza ngokufanele ukuthi ngubani oxhasa ucwaningo ngobungozi be-asbestos, noma amakhemikhali okwenziwa, bazokwelulekwa ukuba bangabaze nobufakazi obuvezwa yiSense About Science kulezi zingxoxo."
I-Sense About Science USA ithunyelwe le mpendulo uButterworth uthe nge-imeyili "udumele ngendaba edukisayo ka-Intercept, ebikhanyisela abantu nezinhlangano ezingaxhumananga neSense About Science USA ndawonye." Uthe iqembu lakhe alithathi mali yezinkampani futhi lizimele ngokusemthethweni kwi-UK Sense About Science.
Uthe futhi, "Angikaze ngihlanganyele emkhankasweni wokuthumela imiyalezo embonini - kunoma yikuphi, ngikhokhelwe noma cha."
Ezinye izintatheli ziphethe ngenye indlela.
Abathelisi ku I-Milwaukee Journal Sentinel, I-Atlantic futhi I-Consumer Reports uveze uButterworth njengomdlali ophambili emizameni ye-PR enonya embonini yamakhemikhali yokuvikela ikhemikhali iBPA.
Ngo-2009, izintatheli uSusanne Rust noMeg Kissinger be-Journal Sentinel kuchaze iButterworth njengomvikeli we-BPA "othanda kakhulu", kanye nesibonelo "sababhali bezobudlelwano bomphakathi embonini yamakhemikhali" abangakudaluli ukusebenzisana kwabo.
"Ukuvikelwa kweBPA kumablogi kuvela kuTrevor Butterworth."
STATS, babhala, "Izisholo ukuthi iyinhlangano yabezindaba ezimele" kodwa "ixhaswe izinhlangano zezinqubomgomo zomphakathi ezikhuthaza ukupheliswa komthetho." Inhlangano engudadewabo, iCentre for Media and Public Affairs, "inomlando wokusebenzela izinkampani ezizama ukudlulisa ukukhathazeka ngokuphepha kwemikhiqizo yazo." UButterworth uthe ukubika kwakhe ngeBPA kukhombisa ubufakazi ngaleso sikhathi obuvela emithonjeni egunyaziwe, kanti abakwa STATS bathumele izimpendulo lapha futhi lapha ekubikeni okubucayi.
Isibonelo sakamuva sendlela imibhalo kaButterworth eyadlala ngayo indima enkulu emizamweni yokubambela ezinkampanini yokuhlambalaza isayensi enenkinga ingabonakala emsebenzini wakhe we-sweetener yokufakelwa eyimpikiswano.
Ngo-2012, iButterworth yabhala i- Isihloko seForbes ukugxeka isifundo esiphakamise ukukhathazeka ngengozi yomdlavuza ye-sucralose. Uchaze abacwaningi, uDkt. Morando Soffritti kanye neRamazzini Institute, “njengento yokuhlekisa.”
Ngo-2016, iqembu eliphambili embonini yezokudla lalinendatshana kaButterworth yango-2012 kanye “nento ehlaya” ehlaziya isitatimende sephephandaba ukuhlasela iSoffritti entsha "yokufunda ukwethuka" okuphakamise ukukhathazeka nge-sucralose. Izintatheli ku- The Independent, The Daily Mail, Telegraph futhi Deseret News wacosha izingcaphuno zaseButterworth ehlazisa abacwaningi, wamkhomba kuphela njengentatheli yaseForbes.
Ngokunjalo, ngo-2011, iButterworth ibingungoti ovelele kwi-International Sweeteners Association Conference, futhi yafaka isicelo sayo kweyabo isitatimende sephephandaba abukho "ubufakazi bokuba yingozi empilweni" kusuka ku-sucralose. Ukhonjwe "njengentatheli evame ukufaka isandla kwi-Financial Times naseWall Street Journal."
Ama-imeyili atholwe yi-USRTK akhombisa ukuthi i-Coca Cola VP URona Applebaum uchaze iButterworth kubaholi beGlobal Energy Balance Network - a Iqembu eliphambili leCoca-Cola sisebenzela ukuphotha isayensi ngokukhuluphala - njengo “umngane wethu”Kanye nentatheli obekade“ukulungele futhi uyakwazi”Ukusebenza nabo. IButterworth ithe ayikaze isebenze nalelo qembu.
IButterworth manje isihlangene neCornell University njenge ovakashele esikanye naye eCornell Alliance for Science, iqembu elasungulwa ngonyaka we-2014 linemali eyisibonelelo esingu- $ 5.6 million yeGates Foundation ukuze khuthaza ama-GMO. Iqembu elixhaswe ngabakwaGates manje selihlanganyela ne-Sense About Science USA kwi-workshop yokufundisa ososayensi abasebasha ukuthi “Yimela iSayensi. "
I-Sense About Science USA nayo isebenza ngokuzibandakanya komphakathi imihlangano yokucobelelana ngolwazi yososayensi ezindaweni ezifana ne-University of Washington, University of Pittsburg, Carnegie Melon, Rockefeller University, Caltech kanye ne-University of Massachusetts, Boston.
UHenry I. Miller - Isikhungo seHoover
UHenry I. Miller, MD, ozakwabo eHoover Institution, ungomunye wabavikeli abanamandla kakhulu wokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo kanye nabaphikisi abanonya bokukufaka amalebuli. Ubhale ukuhlaselwa okuningi embonini yezinto eziphilayo, kufaka phakathi i- "The Colossal Hoax of Organic Agriculture" (Forbes), "Ukulima Ngokwemvelo Akusimeme" (Wall Street Journal) kanye ne "Iqiniso elingcolile Mayelana Nemikhiqizo Engokwemvelo" (Newsweek).
UMiller ubhale futhi evikela i- izibulala-zinambuzane ezilimaza izinyosi, amakhemikhali epulasitiki futhi imisebe evela ezikhungweni zamandla enuzi, futhi ubelokhu ephikisana ne ukwenziwa kabusha kwe-DDT. Akaphendulanga ezicelweni zokuphawula ngale ndaba.
Ngokungafani neButterworth ne-Entine, uMiller unesizinda sesayensi kanye nezimpawu zikahulumeni; ungudokotela wezokwelapha futhi wayengumqondisi osungula ihhovisi le-FDA le-biotechnology.
NjengoButterworth no-Entine, uxhaso lukaMiller luvela emaqenjini axhasa ukwenqaba kwesayensi yezulu - iHoover Institute's umxhasi ophezulu yiSarah Scaife Foundation, kanti leli qembu selithathe nemali kwaSearle Freedom Trust, Exxon Mobile, American Chemistry Council, Charles Koch Foundation naseDonors Trust.
Njengabasunguli be I-STATS ne-Sense Mayelana neSayensi, UMiller ubuye abe nobudlelwano nemikhankaso ye-PR embonini kagwayi. Ngonyaka we-1994 Imemo yeqhinga le-PR lenkampani kagwayi uPhillip Morris, UMiller wabizwa ngokuthi "umsekeli oqavile" womkhankaso womhlaba wonke wokulwa nemithetho kagwayi. Ngo-2012, UMiller wabhala leyo nicotine “akukubi kangako kuwe ngamanani ahanjiswa ngogwayi noma imikhiqizo engenantuthu.”
UMiller ubuye abe yilungu "lebhodi lokweluleka ngokwesayensi" le IGeorge C. Marshall Institute, edume kakhulu ngomkhakha wayo kawoyela negesi okhokhela ukwenqabela ukuguquguquka kwesimo sezulu, nowayengumphathiswa we Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, “okuxhomeke kakhulu ekuxhasweni yizinkampani ezinesabelo sezezimali ezingxoxweni zesayensi okuhlose ukubunjwa,” ngokusho kuka umama Jones.
Mhlawumbe ngokubona ukuthi amadoda akhombisayo akuyona imithombo engcono kakhulu yokuthonya abesifazane abathenga ukudla, uMiller usanda kwabelana ngama-byline nabesifazane abasifazane abajoyine ukuhlasela kwakhe abameli bezempilo kanye nabalimi abaphilayo.
Izibonelo zifaka isiqeshana esibhalwe ngokuhlanganyela noKavin Senapathy, umsunguli we- iqembu lokho kuzama phazamisa imicimbi yokukhuluma kwabagxeki be-GMO, isihloko esithi “Shala Izishoshovu; ” futhi eyodwa nge UJulie Kelly, uthisha wokupheka onomyeni wakhe olwela amalungelo enkampani enkulu yezolimo i-ADM, echaza ezolimo eziphilayo njenge “umbuso omubi. "
Umsebenzi wakamuva kaKelly ufaka isiqeshana ku- Buyekeza National kufaka ukungabaza kubaphenyi besayensi yesimo sezulu, nendatshana eku- The Hill enxenxa iCongress ukuthi ibuyisele imali i-International Agency for Research on Cancer, ayisola "ngokuhlanganiswa komdlavuza" kanye "nokusebenzisa isayensi engaqondakali ukuthuthukisa uhlelo oluthinta ezepolitiki."
Njengoba singena eshumini leminyaka lesihlanu lokulahlekelwa yimpi yomdlavuza, futhi njengoba ukungazinzi kwesimo sezulu kusongela imvelo kanye nohlelo lwethu lokudla, sekuyisikhathi sokuqaqa inethiwekhi yabaphikisi besayensi abathi babanga isembatho sesayensi futhi sibadalule ukuthi bayini: abasabalalisi bezindaba abenza lokho umsebenzi ongcolile wemboni.
Lo mbhalo ushicilelwe ekuqaleni ku Isazi sezinto eziphilayo.
UStacy Malkan ungumsunguli futhi ungumqondisi obambisene weqembu elingenzi nzuzo lomqapha womphakathi Ilungelo le-US Lokwazi. Ungumbhali wencwadi ethi “Not Just a Pretty Face: The Ugly Side of the Beauty Industry,” ongomunye wabasunguli bomkhankaso kazwelonke we-Safe Cosmetics nowake waba ngumshicileli wephephandaba.
Uphenyo lwethu Ukubuyekezwa Kwezifundiswa, I-ADM, I-American Chemistry Council, Umkhandlu waseMelika weSayensi nezeMpilo, U-Archer Daniels Midland, Isisekelo seBill & Melinda Gates, Iphrojekthi Ye-Biotechnology Literacy, UBruce Chassy, UCaltech, UCarnegie Mellon, Isikhungo Sezindaba Nezindaba Zomphakathi, UCharles Koch Foundation, Coca-Cola, ICornell Alliance yeSayensi, Cornell University, Abaxhasi Trust, Exxon Mobil, Iphrojekthi ye-genetic Literacy Project, IGeorge C. Marshall Institute, UGeorge Mason University, I-Global Energy Balance Network, Henry Miller, Isikhungo seHoover, Isikhungo Sokufunda Nokufunda Kwezolimo, UJon Entine, UJulie Kelly, UKavin Senapathy, UKimberly Dennis, I-Koch, Monsanto, Phillip Morris, URona Applebaum, I-Rockefeller University, ISchaife Foundation, Iphrojekthi Yezesayensi Yokufunda, ISearle Foundation, Umuzwa Ngezesayensi, IZIBALO, Templeton, UTracey Brown, UTrevor Butterworth, UC Davis, Inyuvesi yase-Illinois Foundation, Inyuvesi yaseMassachusetts, Inyuvesi yasePittsburg, University of Washington, I-Winkler Family Foundation
Okushiwo yiBill Gates Akukutsheli Ngama-GMO
Posted on Mashi 22, 2016 by UStacy Malkan
Ukubika okuhlobene kwe-US Right to Know:
Amasango Axhaswa Ngezimali Iqembu LeCornell Vandana Shiva
Njengezinkampani ezinkulu zokudla memezela izinhlelo ukufaka ilebuli yokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo e-US, sibheka ngokucophelela izingxabano ze-pro and con mayelana nobuchwepheshe bokudla obuyimpikiswano. Amavidiyo amabili akamuva akhanyisa ukwehlukana kwama-GMO.
NgoJanuwari, uBill Gates wachaza ukuxhasa kwakhe ubuchwepheshe bezakhi zofuzo ku ingxoxo neWall Street Journal kaRebecca Blumenstein:
“Lokho okubizwa ngamaGMO kwenziwa ngokuguqula izakhi zofuzo zalesi sitshalo, futhi kwenziwa ngendlela lapho kunenqubo yokuphepha ephelele, futhi kuyamangalisa ngoba kunciphisa inani lezibulala-zinambuzane ozidingayo, kukhuphula umkhiqizo (futhi) kungasiza ngokungondleki ngokuthola ukuvikeleka kwamavithamini. Ngakho-ke ngicabanga ukuthi, nge-Afrika, lokhu kuzokwenza umehluko omkhulu, ikakhulukazi njengoba bebhekene nokuguquka kwesimo sezulu…
I-US, China, Brazil, zisebenzisa lezi zinto futhi uma ufuna abalimi e-Afrika bathuthukise ukudla okunomsoco futhi bancintisane emakethe yomhlaba, uyazi, inqobo nje uma izinto zokuphepha ezilungile zenziwa, lokho kuyazuzisa ngempela. Kungumjikelezo wesibili wenguquko eluhlaza. Ngakho-ke abantu base-Afrika ngicabanga ukuthi bazokhetha ukunika abantu babo ukudla okwanele. ”
Uma uGates eqinisile, izindaba ezinhle lezo. Lokho kusho ukuthi ukhiye wokuxazulula inkinga yendlala ukwehlisa imigoqo ezinkampanini ukuze zithengise izitshalo zazo ezikwazi ukumelana nesimo sezulu, nezithuthukisiwe zokudla okunempilo.
Ngabe uGates uqinisile?
Enye ividiyo ekhishwe ngesonto elifanayo nengxoxo yeGates 'WSJ inikeza ngombono ohlukile.
The ifilimu elifushane yiCentre for Food Safety ichaza ukuthi isimo saseHawaii, esinezinkundla ezivulekile ezingaphezulu zezilimo ezakhiwe ngezakhi zofuzo kunanoma isiphi esinye isifundazwe, sesingcoliswe yizinhlobo eziningi zezibulala-zinambuzane ezinobuthi.
Ifilimu futhi umbiko chaza ukuthi izinkampani ezinhlanu zamazwe omhlaba ezolimo ziqhuba izivivinyo ezingama-97% ze-GE field eHawaii, futhi iningi lezitshalo lenzelwe ukusinda ukubulala ukhula. Ngokusho kwevidiyo:
“Njengoba izivivinyo eziningi kangaka zemikhakha ye-GE zisesimweni esincane kangako, abantu abaningi eHawaii bahlala, basebenze futhi baye ezikoleni eziseduze nezindawo zokuhlola ezifuthwe ngamandla. Ama-pesticides avame ukukhukhuleka ngakho-ke akumangalisi ukuthi izingane nesikole kanye nemiphakathi yonke iyagula. Ukwenza izinto zibe zimbi kakhulu, ezimweni eziningi, lezi zinkampani akudingeki nokuthi ziveze lokho ezikufafazayo. ”
Uma isikhungo sokuphepha kokudla silungile, leyo yinkinga enkulu. Zombili lezi zindaba azinakulunga ngasikhathi sinye, akunjalo?
Ukulandela umucu wokulandisa kwamaGates, umuntu angalindela ukuthi izinkambu zezolimo zaseHawaii - okuyizindawo ezihamba phambili zokuhlola izitshalo ezakhiwe ngezakhi zofuzo e-US - zibe nokuxokozela ngezibulala-zinambuzane eziphansi, ezikhuthaza isimo sezulu, nezitshalo ezithuthukiswe ngamavithamini.
Esikhundleni salokho, iningi lezitshalo ze-GMO ezilinywa eHawaii nase e-US izitshalo ezibekezelela ukhula eziqinisa ukusetshenziswa kwe-glyphosate, isithako esiyinhloko kwi-Roundup kaMonsanto kanye nekhemikhali le-World Health Organisation Ochwepheshe bomdlavuza bahlukanisa njenge “mhlawumbe okubanga umdlavuza ebantwini.”
Eminyakeni engama-20 kusukela iMonsanto yethula ummbila othi “Roundup Ready” GMO kanye nesoya, ukusetshenziswa kwe-glyphosate sekune kukhuphuke izikhathi ezingu-15 futhi manje “sekuyikhemikhali lezolimo elisetshenziswa kakhulu emlandweni womhlaba”, kubika iDouglas Main kuNewsweek.
Ukusetshenziswa kwe-herbicide esindayo kuye kwashesha ukumelana nokhula ezigidini zamahektare epulazi. Ukubhekana nale nkinga, iMonsanto iyi ukuphuma ubhontshisi obusha obenziwe ngezakhi zofuzo obuklanyelwe ukusinda enhlanganisweni yamakhemikhali abulala ukhula, i-glyphosate ne-dicamba. I-EPA inayo okwamanje ukuvuma inhlanganisela entsha yokubulala ukhula.
Kepha iDow Chemical isanda kuthola ilambu eliluhlaza kusuka kujaji lesifundazwe i-combo yayo entsha yokubulala ukhula engu-2,4D ne-glyphosate, ebizwa nge-Enlist Duo, eyenzelwe imbewu ye-Dow's Enlist GMO. I-EPA ilahle eceleni imininingwane yayo yezokuphepha ukuze ivume u-Enlist Duo, kubika uPatricia Callahan eChicago Tribune.
I-ejensi ibe isihlehlisa inkambo futhi yacela inkantolo ukuthi phuma ekuvunyelweni kwayo - isicelo ijaji esasiphika ngaphandle kokubeka isizathu.
Konke lokhu kuphakamisa imibuzo mayelana nezimangalo uBill Gates ezenziwe engxoxweni yakhe yeWall Street Journal mayelana nezinqubo eziphelele zokuphepha nokuncishiswa kokusetshenziswa kwezibulala-zinambuzane.
Ukukhathazeka kukhula eHawaii, e-Argentina, e-Iowa
Esikhundleni sokuphithizela ngezinhlobo ezintsha ezethembisayo zezitshalo ze-GMO eziguquguqukayo, iHawaii iphithizela ngemizamo engaphansi ukuvikela imiphakathi kusuka ekubulaweni kwezibulala-zinambuzane, kudinga izinkampani zamakhemikhali ukuze udalule izibulala-zinambuzane bayasebenzisa, futhi vimbela i-GMO-ukutshala izitshalo ezindaweni eziseduze nezikole nasemakhaya asebekhulile.
Izikole eziseduze namapulazi eKauai zikhishiwe ngenxa yokukhukhuleka kwezibulala-zinambuzane, kanti odokotela eHawaii bathi babheka ukwanda kokukhubazeka kokuzalwa nezinye izifo abasola ukuthi kungenzeka zihlobene nezibulala-zinambuzane, kubika uChristopher Pala ku-Guardian futhi Isazi sezinto eziphilayo.
Ngokusho the American Academy of Pediatrics, ukuvezwa kwezibulala-zinambuzane zangaphambi kokubeletha nokuphila kwasekuqaleni kuxhunyaniswa nomdlavuza wezingane, kwehle ukusebenza kwengqondo, izinkinga zokuziphatha kanye nezinkinga zokuzalwa.
E-Argentina - umkhiqizi wesithathu ngobukhulu emhlabeni wezitshalo ze-GMO - odokotela nabo baphakamisa ukukhathazeka ngamazinga aphakeme kunesilinganiso somdlavuza nezinkinga zokuzalwa abasola ukuthi zihlobene nezibulala-zinambuzane, kubika uMichael Warren ku The Associated Press.
Indaba kaWarren yango-2013 icaphune ubufakazi “bokusetshenziswa okungalawulwa kwezibulala-zinambuzane”:
“I-Associated Press ibhale amacala amaningi ezweni lonke lapho kusetshenziswa khona ubuthi ngezindlela ezingalindelwe yisayensi yezomthetho noma ngokuvinjelwa ngqo ngumthetho okhona. Isifutho singena ezikoleni nasemakhaya futhi sihlala emithonjeni yamanzi; abasebenzi basemapulazini bahlanganisa ubuthi bengenazo izinto zokuzivikela; abantu basemakhaya bagcina amanzi ezitsheni zezibulala-zinambuzane obekufanele ngabe zacekelwa phansi. ”
Phakathi ku indaba yokulandelela, IMonsanto ivikele i-glyphosate njengephephile futhi yafuna izilawuli ezithe xaxa ukunqanda ukusetshenziswa kabi kwamakhemikhali ezolimo, kanti uWarren ubike ukuthi:
"Odokotela base-Argentina okwaxoxwa nabo yi-AP bathi amacala abo - hhayi izivivinyo zaselabhorethri - akhombisa ukuhlangana okusobala phakathi kokufika kwezolimo eziqinile ezimbonini kanye nokwenyuka kwamazinga omdlavuza nezinkinga zokuzalwa emiphakathini yasemakhaya, futhi bafuna izifundo ezibanzi, zesikhathi eside ukunqabela ukuchayeka kwe-agrochemical njengembangela yalokhu nezinye izifo. ”
Okhulumela iMonsanto uThomas Helscher uphendule wathi, “ukungabi bikho kwemininingwane ethembekile kwenza kube nzima kakhulu ukusungula ukuthambekela kwezifo futhi kube nzima kakhulu ukusungula ubudlelwano obuyimbangela. Ngokwazi kwethu abukho ubudlelwano obuyimbangela obusunguliwe. ”
Ukungabikho kwemininingwane ethembekile kuhlanganiswa neqiniso lokuthi amakhemikhali amaningi ahlolelwa ukuphepha ngawodwana, kepha ukuvezwa ngokuvamile kubandakanya inhlanganisela yamakhemikhali.
'Siphefumula, siyadla, futhi siphuza imishanguzo yemithi'
Kamuva Ucwaningo lwe-UCLA bathole ukuthi abalawuli beCalifornia bayahluleka ukuhlola ubungozi bezempilo bezingxube zezibulala-zinambuzane, noma imiphakathi yasepulazini - kufaka phakathi izindawo eziseduze nezikole, izikhungo zokunakekela izingane namapaki - ivezwe ezibulala zinambuzane eziningi, ezingaba nemithelela emikhulu kunaleyo ebilindelwe yezempilo.
Ukuvezwa nakho kwenzeka ngemizila eminingi. Ebika ngezinkinga zezempilo nokukhathazeka komphakathi e-Avia Teria, idolobha elisemakhaya e-Argentina elizungezwe amasimu kabhontshisi, u-Elizabeth Grossman wabhala ku-National Geographic:
“Ngenxa yokuthi kusetshenziswa izibulala-zinambuzane eziningi kakhulu emadolobheni ase-Argentina, izinselelo zokuqonda ukuthi yini engase ibangele izinkinga zempilo ziyabonakala, kusho uNicolas Loyacono, ongusosayensi nodokotela wezempilo e-University of Buenos Aires. Kule miphakathi, uLoyacono uthi, "siphefumula, siyadla, futhi siphuza imishanguzo yemithi."
E-Iowa, ekhulisa ummbila owenziwe izakhi zofuzo ukwedlula noma yimuphi omunye umbuso e-US, imithombo yamanzi ingcoliswe ngamakhemikhali aphuma emapulazini ommbila nasezilwaneni, kubika uRichard Manning kumagazini kaFebhuwari ka. Umagazini kaHarper:
“Ososayensi abavela emnyangweni wezolimo kuhulumeni nase-Iowa State University bakhiphe amapensela baluhlola uhlelo lwezixazululo ezinje zobuchwepheshe obuphansi. Uma ama-40% ezindawo zokutshala ezifunwa ummbila zingatshalwa nezinye izitshalo kanye nedlelo laphakade, lonke udoti lwezinkinga olubangelwe ukulima kwezimboni - ngokuqinisekile ukungcola kwe-nitrate kwamanzi okuphuza - kungaqala ukushabalala. ”
Lokhu okuhlangenwe nakho ezindaweni ezintathu ezihola umhlaba wonke ekukhiqizweni kwezitshalo ze-GMO kusobala ukuthi kuhambisana nombuzo wokuthi ngabe i-Afrika kufanele yini yamukele ama-GMO njengesisombululo esingcono kakhulu sokuvikeleka kokudla esikhathini esizayo. Manje kungani uBill Gates engakhulumi ngalezi zinkinga?
Abaxhasi be-GMO bathanda ukugxila ekusetshenzisweni kwesikhathi esizayo kobuchwepheshe bezobunjiniyela, ngenkathi bedlala, benganaki noma bephika ubungozi. Kaningi bazama ukukhipha inyumbazane abagxeki abaphakamisa ukukhathazeka njengabangenalwazi noma abaphikisana nesayensi; noma, njengoba kwenza uGates, basikisela ukukhetha okungamanga ukuthi amazwe kumele amukele ama-GMO uma efuna "ukuvumela abantu bawo babe nokudla okwanele."
Lo mqondo weqa phezu kokuthi, ngemuva kwamashumi eminyaka yentuthuko, izitshalo eziningi ze-GMO zisakhiwa ukuze zimelane namakhemikhali okubulala ukhula noma zikhiqize ama-insecticide (noma zombili) ngenkathi izici eziyinkimbinkimbi (kanye ne-hyped), njengokuthuthuka kwamavithamini, zehlulekile ukuphuma emhlabathini.
“Njengebhodi lokuhambisa phezulu le-Back to the future franchise, irayisi legolide liwumqondo wakudala obonakala nje ngaphesheya kokuqondakala kweqiniso,” kubika uTom Philpott kuMama Jones.
Okwamanje, izinkampani zezolimo zomhlaba wonke ezinengxenye enkulu ye- ibhizinisi lembewu bayazuza kuzo zombili izimbewu ezingamelana nokubulala ukhula kanye nemithi yokubulala ukhula eklanyelwe ukumelana nayo, futhi izicelo eziningi ezintsha ze-GMO epayipini zilandela lo mthambo ofanayo.
Lezi zinkampani nazo zisebenzise amakhulu ezigidi zamadola ngemizamo yobudlelwano bomphakathi ukukhuthaza ezolimo ezinamandla, zamakhemikhali, ezolimo ze-GMO njengempendulo yendlala emhlabeni - kusetshenziswa amaphuzu afanayo okukhuluma abekwa uGates enkulumweni yakhe yeWall Street Journal, nokuthi amaqembu axhaswe ngamaGates nawo ayenanela.
Ngendatshana yakamuva ku Isazi sezinto eziphilayo, Ngicubungule imiyalezo yeCornell Alliance for Science, uhlelo lokuxhumana lwe-pro-GMO olwethulwa ngo-2014 ngesibonelelo semali engu- $ 5.6 million esivela kwiGates Foundation.
Ukuhlaziywa kwami ​​kutholile ukuthi leli qembu linikeza ulwazi oluncane mayelana nobungozi noma ukwehla kwama-GMO, futhi esikhundleni salokho kukhulisa i-PR mantra yomkhakha wezolimo ukuthi isayensi ixazululwe ekuphepheni kanye nasidingo sama-GMO.
Isibonelo, i-FAQ yeqembu ithi,
Lokhu kuphikisana neNhlangano Yezempilo Yomhlaba, okushoyo, "Akunakwenzeka ukwenza izitatimende ezijwayelekile ngokuphepha kwakho konke ukudla okuphathelene ne-GM." Bangaphezu kwama-300 ososayensi, ama-MD nezifundiswa sebeshilo "akukho ukuvumelana okungokwesayensi ngokuphepha kwe-GMO."
The ukukhathazeka ososayensi bayakhulisa mayelana nokubulala ukhula okusekelwe e-glyphosate okuhambisana nama-GMO nakho kusobala ukuthi kufanelekile engxoxweni yezokuphepha.
Kodwa-ke esikhundleni sokuphakamisa lezi zingqinamba njengengxenye yengxoxo eqinile yesayensi, iCornell Alliance for Science ithumela abafo nabalingani bayo ukukhathazeka okuphansi mayelana nezibulala-zinambuzane eHawaii nase zihlasele izintatheli ababika ngalezi zinto ezikhathazayo.
Kunzima ukuqonda ukuthi lezi zinhlobo zama-shenanigans zisiza kanjani ukuxazulula indlala e-Afrika.
Isayensi yomphakathi iyathengiswa
ICornell Alliance for Science iyisibonelo sakamuva sephethini enkulu ehluphayo yamanyuvesi kanye nezifundiswa ezisebenzela izintshisekelo zebhizinisi ngaphezu kwesayensi.
Amahlazo akamuva ahlobene nalo mkhuba afaka osolwazi abaxhaswe yiCoca-Cola abathi yehlise isixhumanisi phakathi kokudla nokukhuluphala, uprofesa obheka isimo sezulu ochaze amaphepha akhe esayensi ngokuthi “okunikezwayo”Yabaxhasi bezinkampani, kanye nemibhalo etholwe yiqembu lami i-US Right to Know edalula osolwazi abasebenza eduze neMonsanto ukukhuthaza ama-GMO ngaphandle kokuveza obudlelwano babo neMonsanto.
In interview with the Chronicle of Education Ephakeme, UMarc Edwards, uprofesa waseVirginia Tech owasiza ekudaluleni inkinga yamanzi yaseFlint, uxwayise ngokuthi isayensi yomphakathi isengozini enkulu.
“Ngikhathazeke kakhulu ngesiko lezifundiswa kuleli kanye nezikhuthazo ezinhlanhlatha ezinikezwa ubuhlakani obusha. Izingcindezi zokuthola uxhaso zimangalisa nje. Sonke sikulesi treadmill se-hedonistic - siphishekela uxhaso, siphishekela udumo, siphishekela i-h-index - nomqondo wesayensi njengomsebenzi womphakathi uyalahleka… Abantu abafuni ukukuzwa lokhu. Kepha kufanele sikulungise lokhu, futhi sikulungise ngokushesha, uma kungenjalo sizolahlekelwa lobu budlelwano bomphakathi. Bazoyeka ukuseseka. ”
Njengesisekelo esicebe kunawo wonke emhlabeni futhi njengabaxhasi abakhulu bezocwaningo lwezemfundo, ikakhulukazi emkhakheni wezolimo, iBill & Melinda Gates Foundation isethubeni lokuxhasa isayensi ngokuthakazelisa umphakathi.
Amasu eGates Foundation, noma kunjalo, avame ukuhambisana nezintshisekelo zebhizinisi. A Ukuhlaziywa kwe-2014 yiqembu labacwaningi elizinze eBarcelona iGrain lithole ukuthi cishe ama-90% wezigidigidi ezingama- $ 3 iBill & Melinda Gates Foundation ayisebenzisile ukuzuzisa abantu abalambile emazweni ampofu kakhulu emhlabeni waya ezizweni ezicebile, ikakhulukazi yocwaningo lobuchwepheshe obuphakeme.
A Januwari 2016 umbiko Iqembu lezokuvikela lase-UK iGlobal Justice Manje lithi ukusetshenziswa kweGates Foundation, ikakhulukazi kumaphrojekthi wezolimo, kukhulisa ukungalingani futhi kugxilisa amandla ezinkampani emhlabeni jikelele.
"Mhlawumbe okugqame kakhulu ngeBill & Melinda Gates Foundation ngukuthi yize kuneqhinga layo eliqinile lokusebenzisana kanye nomthelela ongajwayelekile kohulumeni, izifundiswa kanye nabezindaba, kodwa akukho mazwi aphikisayo," kusho leli qembu.
Kepha amazwi ezinkampani asondele. Inhloko yethimba locwaningo nentuthuko kwezolimo eGates Foundation nguRob Horsch, owachitha amashumi eminyaka akhe umsebenzi eMonsanto.
Icala lengxoxo ethembekile
Esikhundleni sokwenza icala le-propaganda yama-GMO, amaqembu axhaswe uBill Gates namaGates angadlala indima ebalulekile ekuphakamiseni ubuqotho besayensi mpikiswano ye-GMO, nokuqinisekisa ukuthi ubuchwepheshe obusha bokudla buzuzisa imiphakathi.
Ubuchwepheshe abuhle noma abubi ngokwemvelo; konke kuya ngomongo. Njengoba uGates akubeka, "inqobo nje uma izinto zokuphepha ezifanele zenziwa." Kepha lezo zinto zokuphepha azenziwa.
Ukuvikela izingane ekudalweni kwezibulala-zinambuzane ezinobuthi eHawaii nase-Argentina nokuhlanza ukuhlinzekwa kwamanzi e-Iowa akudingeki kuvimbele ubunjiniyela bezakhi zofuzo buqhubekele phambili. Kepha lezo zingqinamba ziqokomisa isidingo sokuthatha izinyathelo zokuqapha ngama-GMO kanye nezibulala-zinambuzane.
Lokho kungadinga ukuhlolwa okuqinile nokuzimele kwemithelela yezempilo nezemvelo, kanye nokuvikelwa kwabasebenza emapulazini nasemiphakathini.
Lokho kungadinga ukwenza izinto obala, kufaka phakathi ilebula yokudla kwe-GMO kanye nokufinyelela okuvulelekile kwimininingwane yesayensi, ukwaziswa komphakathi ngokufafazwa kwezibulala-zinambuzane, nokudalulwa okugcwele kwethonya lemboni ezinhlanganweni zezemfundo nezesayensi.
Kungadinga ukuba nengxoxo eqotho ngokwengeziwe ngama-GMO kanye nezibulala-zinambuzane ukuze zonke izizwe zikwazi ukusebenzisa lonke ulwazi oluphelele lwesayensi njengoba zibheka ukuthi zingabusebenzisa noma cha ubuchwepheshe bezimboni zezolimo ukuze zinikeze ukudla.
UStacy Malkan ungomunye wabasunguli futhi ungumqondisi-co I-US Ilungelo Lokwazi. Bhalisela okwethu incwadi yezindaba lapha. UStacy ungumbhali wencwadi ethi, 'Not Just a Pretty Face: The Ugly Side of the Beauty Industry,' (New Society Publishing, 2007) futhi wasungula ngokubambisana iCampaign for Safe Cosmetics. Landela uStacy uqhubeke I-Twitter: @stacymalkan.
Ukudla Okucatshangwayo, I-GMO Africa, Isisekelo seBill & Melinda Gates, Bill Gates, Isikhungo Sokuphepha Kokudla, Coca-Cola, ICornell Alliance yeSayensi, IDow Chemical, Ubulungiswa Bomhlaba Manje, I-GMO, Monsanto, UStacy Malkan, UThomas Helscher
Kungani iGates Foundation Funding iwuMkhankaso WeGNO Propaganda eCornell?
Ukukhishwa Ngokushesha: NgoLwesihlanu, Januwari 22, 2016
Ngemininingwane engaphezulu Xhumana: Stacy Malkan, 510-542-9224, stacy@usrtk.org
Ukuhlaziywa okusha kwe-US Right to Know okushicilelwe namuhla ku Isazi sezinto eziphilayo ibhala ukuthi izigidi zamadola ezivela kuBill & Melinda Gates Foundation zisetshenziswa kanjani ukwenza umkhankaso wepropaganda ophuma eCornell University okhuthaza ama-GMO kanye nemithi yokubulala izinambuzane ukuze kusizakale izinkampani zezolimo.
Lo mbhalo ubhala ukuthi iCornell Alliance for Science, eyethulwe ngo-2014 ngesibonelelo sika- $ 5.6 million seGates Foundation, isebenza njengomkhankaso we-PR okhuthaza izitshalo kanye nokudla okwenziwe ngezakhi zofuzo kusetshenziswa imiyalezo efanayo engeyona kanye namasu angenangqondo imboni yezolimo esetshenziswayo ukusunduza i-ajenda yayo yezolimo enamandla kakhulu, ye-GMO.
Ngaphansi kwengubo ethi "ukumela isayensi," iCornell Alliance for Science ijwayele ukwenza izitatimende ezingezona ezesayensi mayelana namaGMO.
ICornell Alliance for Science ibambisene nezimboni zamakhemikhali ze-PR ukufundisa "isayensi" kubafundi.
ICornell Alliance for Science inikela ubudlelwano nabameli beGMO kubandakanya nobudlelwano bobuntatheli obungabazekayo ngokokuziphatha.
Ubufakazi balezi zimangalo buchazwe ngokuningiliziwe ku-athikili "Kungani iCornell University ibamba umkhankaso we-GMO propaganda?”NguStacy Malkan, umqondisi obambisene weqembu labathengi i-US Right to Know.
Ngasekuqaleni kwaleli sonto, iqembu lomkhankaso elizinze e-UK iGlobal Justice Manje likhiphe i-a umbiko okwenza icala lokuthi iBill & Melinda Gates Foundation, okuyisisekelo esikhulu kunazo zonke emhlabeni sokunikela, isekela amasu okuxhasa izintshisekelo zezinkampani zamazwe omhlaba kulimaze ubulungiswa kwezenhlalo nezomnotho.
Ngeminye imininingwane ngeGates Foundation:
Umbiko Wezobulungiswa Womhlaba Wonke, ngoJanuwari 2016, "Gated Development - ngabe iGates Foundation ihlale ingumthelela omuhle?"
Guardian, "Ngabe uGates noRockefeller basebenzisa amandla abo ukusetha i-ajenda emazweni ampofu?"
Seattle Times, "INew Report ithi iGates Foundation incamela amabhizinisi, hhayi abampofu,"
Umbiko wezinhlamvu, Novemba 2014, "IGates Foundation iyisebenzisa kanjani imali yayo ukondla umhlaba?"
I-GMO, Ukukhishwa Kwezindaba imboni yezolimo PR, Isisekelo seBill & Melinda Gates, ICornell Alliance yeSayensi, Ubulungiswa Bomhlaba Manje, UStacy Malkan